Studer Trust supports schools with more than just classroom buildings. Particularly for schools with whom we have already builtapartnership, we are always looking for additional ways to put our generous donors’ funds to work to improve education both in and outside the classroom walls. Most recently, we’ve been focusing our attention on building playgrounds. Playgrounds help students by giving themachance to get needed physical activity, learn and practice social skills and have fun. Additionally, as COVID-19 and the current political unrest has kept schools closed, open-air playgrounds remain an important community space for students and non-students alike.
So far Studer Trust has helped communities build 17 playgrounds that serve 3,182 students across Myanmar. This includes our most recent project at Tada Oo Monastic Middle School. Tada Oo School is located about 95km from Myanmar’s second largest city, Mandalay. It was established in 1993 and now offers instruction for Kindergarten to 7th grades, serving 150 students from five surrounding villages. Studer Trust first helped Tada Oo School in 2017 in the construction ofabuilding with four new classrooms, water and toilet facilities. Having conducted further follow ups with the school since that project, we identified it asapromising place to constructaplayground based on feasibility and need.
That being said, the process was met with its fair share of obstacles that Studer Trust, the school and the larger community had to help navigate. The first and biggest was getting supplies to arrive. Because we began construction in Myanmar’s rainy season, main roads were blocked and the village only accessible by water transport. Therefore, we arranged for the materials to be first delivered to the nearest large town, Singtu, and then carried by boat to Tada Oo. From there, the generous community members helped to carry the supplies from the river to the school. Given curfew rules and travel restrictions, we were also unable to bring in our standard construction team. Thankfully, the community continued to offer their assistance to the Studer Trust construction team once they were able to make it to the village. This included help in preparing and evening-out the grounds, laying the fence and painting, so that Studer Trust could best manage and lead the materials transportation and the construction of the playground and equipment.
Ultimately, this playground was one of our biggest yet, including slides, jungle gyms, monkey bars and swings. The students and school administrators are extremely happy and excited for their new facilities. The school’s principal explained that “it is amazing to receiveaschool playground at our school for my children. There is no government or monastic school in our own or surrounding townships haveaplayground. I am proud of it and we will take care of it to repair whenever necessary”. A young student said, “I can't wait to reopen the school, so exciting. I really want to play on our new playground with my friends!" Studer Trust is proud of yet another playground project, thankful for our community partners and excited to continue to help support the entire educational experience of students around Myanmar.
ဆောင်းရာသီ၏ ကောင်းမြတ်သော လက်ဆောင်မွန်
Studer Trust အနေဖြင့် စာသင်ခန်းအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ပေးခြင်းသာမက အခြားသောအရာများဖြင့်လည်းစာသင်ကျောင်းများအား အထောက်အပံ့ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည့် ကျောင်းများအတွက် အလှူရှင်များ၏ ရန်ပုံငွေကြေးများကို အသုံးချပြီးစာသင်ခန်းနံရံအပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းဘက်နှစ်ခုအတွက် ပညာရေးအား တိုးတက်လာစေရန် မည်သို့မည်ပုံ ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများအား အမြဲတစေ ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။ များမကြာမီကပင် ကျောင်းသားများအတွက်ကစားကွင်းများဆောက်လုပ်ပေးရန် အာရုံစိုက်၍ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကစားကွင်းများသည် ကျောင်သားများအားခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ဖြစ်စေရန် အခွင့်အလမ်းပေးပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေကာ ပျော်ရွှင်မှုများလည်းရရှိစေပါသည်။ ထပ်လောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ကိုဗစ် -၁၉ နှင့် လက်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များကြောင့်စာသင်ကျောင်းများအား ပိတ်ထားရကာ လစ်လပ်နေသည့်‌ ကစားကွင်းများသည် ကျောင်းသားများသာမက ကျောင်းတက်ရောက်နေခြင်းမရှိသူများအတွက်ပါ အရေးပါသော စုဝေးရာ စုရပ်ငယ်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ယခုလက်ရှိအထိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှားရှိ ကျောင်းသားဦးရေ ၃၁၈၂ ဦး အတွက် ကစားကွင်းစုစုပေါင်း (၁၇)ခု တည်ဆောက်သည့်နေရာတွင် လူထုအကျိုးပြု ကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တံတားဦးဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းတွင် မကြာသေးမီက ပြီးဆုံးခဲ့သည့် ပရောဂျက်သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ တံတားဦး ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည့် မန္တလေး‌မြို့မှ ၉၅ကီလိုမီတာ အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာငါးရွာမှ ကျောင်းသာဦးရေ ၁၅၀ အား မူလတန်းမှ သတ္တမတန်းအထိ စာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ Studer Trust အနေဖြင့် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် တံတားဦးဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းအား စာသင်ခန်းသစ်လေးခန်းနှင့် ရေအိမ်များ ထောက်ပံ့ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါသည်။၎င်း ပရောဂျက်ပြီးစီးပြီးသည့်ကာလမှစ၍ အခြားလိုအပ်ချက်များရှိ၊မရှိ ကြည့်ရှုနေခဲ့လျက်ရှိရာမှာ လိုအပ်ချက်များအရ ကစားကွင်းတည်ဆောက်ပါက အနာဂတ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာမည့်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်အပြီးတွင် အခက်အခဲအချို့အားတွေ့ကြုံခဲ့ရကာ Studer Trust အပါအဝင် စာသင်ကျောင်းနှင့် လူထုမှ ကူညီပေးရန် လိုအပ်လာခဲ့ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အခက်အခဲသည် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ စာသင်ကျောင်းရှိရာ နေရာဆီ အောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိလာရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ မိုးရာသီအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစတင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဓိက လမ်းမကြီးအား ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရကာ ရွာဆီသို့ ရေကြောင်းမှ တစ်ဆင့်သာ ရောက်ရှိနိုင်တော့မည်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ရွာနှင့် အနီးဆုံး စဥ့်ကူးမြို့သို့ ပစ္စည်းများ ဦးစွာပို့ဆောင်စေရန် စီစဉ်ခဲ့ကာ နောက်တွင်မှ ၎င်းမြို့မှ တစ်ဆင့် တံတားဦးသို့ လှေဖြင့်ပို့ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။လှေဆိပ်မှတစ်ဆင့် လုပ်အားပေး တစ်ချို့က စာသင်ကျောင်းထံသို့ ပစ္စည်းများအားသယ်ဆောင်လာပေးခဲ့ပါသည်။ အပြင်ထွက်ချိန် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများနှင့် ခရီးသွား ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် မူလပထမ ဆောက်လုပ်ရေး ပညာရှင်အဖွဲ့အား ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိရမည်မှာ Studer Trust ၏ ဆောက်လုပ်ရေး ပညာရှင်များ ရွာသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ချိန်တွင် ရပ်ရွာလူထုမှ ဆက်လက်ပြီးအကူအညီပေးခဲ့မှုများပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရပ်ရွာလူထုမှ အကူအညီပေးမှုများထဲတွင် မြေညှိပြုပြင်ခြင်း၊ မြေတူးခြင်းစသည်တို့ အပြင် ခြံစည်းရိုးနေရာချထားခြင်း၊ဆေးသုတ်ခြင်းများလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ထိုကူညီမှုများကြောင့်လည်း Studer Trust အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ရာတွင်နှင့် ကစားကွင်းတည်ဆောက်ရာနှင့် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်မှုအား အသေအချာ စီမံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးသတ်အားဖြင့်ဆိုရသော် လျှောများ၊ Jungle Gym (တွယ်တက်စရာတန်းများ) ၊ Monkey Bars (တွဲလောင်းခိုဆော့ကစားရန်နေရာ) နှင့် ဒန်းများပါဝင်သော ကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။စာသင်ခန်းဆောင် အသစ်များရရှိထားသည့်အတွက် စာသင်ခန်းကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းတာဝန်ခံများက အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပျော်ရွှင်နေကြပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ “ ကလေးတွေအတွက် စာသင်ကျောင်းမှာ ကစားကွင်းတစ်ခု ရရှိခဲ့လို့ အလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ရွာမှာရော ရွာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာပါ ကစားကွင်းရှိတဲ့ အစိုးရစာသင်ကျောင်းနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းတွေရယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပြီး လိုအပ်လာရင်လည်း ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်” ဟု ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားငယ်တစ်ယောက်ဆီမှ “ကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ကစားကွင်းအသစ်မှာ အရမ်းကစားချင်နေပြီ။” ဟု စကားသံကြားရပါသည်။ Studer Trust အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကစားကွင်းတည်ဆောက်ရသည့် ပရောဂျက်အတွက် ဂုဏ်ယူမိကာ ကူညီပေးခဲ့သည့် ရပ်ရွာလူထုအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကျောင်းသားများအား ပညာရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံအားလုံး ရရှိခံစားစေနိုင်ဖို့ရာ ဆက်လက်အထောက်အပံ့ပေးသွားရန်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိပါသည်။